Ciidanka Kumaandooska Soomaaliya oo sheegay in ay la wareegeen Baar Sanguuni (SAWIRRO) | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Ciidanka Kumaandooska Soomaaliya oo sheegay in ay la wareegeen Baar Sanguuni (SAWIRRO)
Ciidanka Kumaandooska Soomaaliya oo sheegay in ay la wareegeen Baar Sanguuni (SAWIRRO)
Ciidamada Xoogga dalka qeybta 43-aad iyo kuwa Kumaandooska Soomaaliya oo wata gadiidka dagaalka ayaa Al-shabaab kala wareegay degaanka Baar Sanguuni oo qiyaastii magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose u jira 45-KM.
Howlgalka Al-shabaab looga saaray Baar Sanguuni ayaa waxaa si wadajir ah u fuliyay Ciidamada Xoogga dalka qeybta 43-aad, Ciidamada Kumaandooska Soomaaliya iyo ciidamada Daraawiishta Jubbaland
Taliyaha Ciidanka Xoogga qeybta 43-aad General Ismaaciil Saxardiid oo la hadlay Idaacadda ku hadasha Afka Ciidamada ayaa sheegay in Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa Kumaandooska Danab ay Al-shabaab ka saareen degaanka Sanguuni ee gobolka Jubbada Hoose.
General Saxardiid oo sii hadlay ayaa sheegay Howlgalka Al-shabaab looga saaray degaanka Sanguuni in ay ka qeyb qaateen Diyaarado Helicopter ah oo ay wateen Ciidamo u dhashay wadanka Mareynkanka.
Wuxuu kaloo sheegay Taliyaha intii uu howlgalkan socday in Ciidamada ay dileen 7 dagaalame oo ka tirsanaa ururka Al-shabaab, iyo Afar Sarkaal oo uu ka mid ahaa sarkaalkii Shabaab ee degaankaasi.
Ugu dambeyntii Taliyaha Ciidanka Xoogga qeybta 43-aad General Ismaaciil Saxardiid ayaa sheegay Ciidamada Xoogga dalka in ay gacanta ku dhigeen laba gadiidka nuuca dagaalka ah oo ay lahaayeen Dagaalyahanada Shabaab.